Howlo Nadaafadeed oo ka soconaya degmada Badhaadhe ee G. J/hoose
Howlo nadaafadeed ayaa si aanan habsami lahayn uga billowday deegaanka Bahdaadhe ee gobbolka Jubbada Hoose.
Maamulka deegaanka oo hoosta maamulka Axmed Madoobe ee Jubba ayaa sheegay in dhamaan dadka deegaanka deggan loogu baaqayo in ay ka wada qeyb qaataan nadaafadda degmada Badhaadhe.
Waddooyinka waa weyn ee Badhaadhe iyo meelo kamid ah degmada ayaa lagu arkayaa dad ku howlan nadaafadda si bilicdii deegaanka mar kale loo helo.
Ma ahan markii ugu horreysay oo howlo nadaafadeed laga sameeyo degmada Badhaadhe ee gobbolka Jubbada Hoose.
Xafiiska Muqdisho, read more... Dadka qurba joogta oo hormarinta Muqdisho ku baraarugay
Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho ayaa maalmihii dambe waxaa ku soo kordhayay muwaadiniinta dalka u dhashay ee ka imaanaya dalka dibaddiisa.
Magaalada marka aad dhex mareyso waxaa kaaga muuqanaya ififaalo wanaagsna oo qurba joogta ay soo kordhiyeen sida ganacsiga, dhismayaal kala duwan iyo howlo kale oo ka socda.
Dhaqdhaqaaqa magaalada ka socda ayaa sawir guud ka bixinaya sida magaalada ay tahay waxaadna moodaa in dadku badankii soo laabanayo arrintaa oo ay ugu wacxan tahay xogaa xasilooni ah oo la dareemay.
Waxaa sidoo kale Muqdisho ku soo kordhay Hotello badan waxaana hotelladaasi deggan intooda badan dad ka yimid qurabaha, umadda Soomaaliyeed ee ku noolaa bannaanka wadanka ayaa u muuqda kuwa hadda u soo jeestay in ay dhistaan dalkooda.
Xafiiska Muqdisho, read more... Dib u dhis laga bilaabayo meelo dalka kamid ah
Fowziyo Yuusuf xaaji Aaden oo ah raysal wasaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in balan qaadyo ay kala soo kulmeen safarkii China ay ku tagtay dhowaan.
Mar Gigida dayuuradaha ee magaalada Muqdisho ay kula hadleysay warbaahinta waxa ay sheegtay in dowladda Shiinaha ay u balan qaaday in ay gacan ka geysaneyso in mar kale Soomaaliya ay ku noqoto halkii ay taagneyd 23 sano ka hor.
Fowziya ayaa warfidiyeenka u sheegtay in madaxda Shiinuhu ay u balan qaadeen in ay dib u dhis ku sameyn doonaan wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo ilaa Barbara, Stadium Muqdisho, Isbitaalka Banaadir iyo Tiyaatarka.
Arrintan ayaa noqotay mid dhammaan ka farxisay bulsho badan oo ku nool dalka iyo dibadda, maadaama wadanka uu burbursanaa muddo ku siman 22-kii sano ee la soo dhaafay.
Xafiiska Muqdisho. read more... 1500 oo indhaha loo fiiqay
11 Maarso, 2013 Halka ka dhageyso
Magaalada Muqdisho, waxaa isbitaalka indhaha ee National Eye Centre lagu soo gabagabeeyay qaliin indhaha oo loo sameeyay ku dhawaad 1500 boqol oo ruux.
(more…) read more... Isbeddelka Muqdisho
Halka riix oo daawo Isbeddelka Muqdisho – Muqdisho iyo horumarka aay ku tilaabsatay. Waxaad ku arkeysaa dumar ku mushaaxaya gawaari oo keli ah, marna waardiya la’aan ah. Waxaa Muqdisho ku soo kordhaya goobaha dumarka isku qurxiya, hase ahaatee waxay tabanayaan sinaan la’aan iyo cadaalad la’aan iyo tacadiyo kale oo faro badan oo u baahan wax ka qabad. Daawo warbixintii BBC-da.
read more... « Prev123..............9293949596Next » Special Info